Paramende Yoramba Ibvunza Zvakaitika kuMangonda ekwaMarange
Kukadzi 24, 2018
Paramende inoti iri kushushikana zvikuru kuti kambani yehurumende inoona zvekutengeswa kwezvicherwa yeMinerals Marketing Corporation of Zimbabwe (MMCZ) iri kushandiswa nehurumende mukuita zvehuwori uye mashandiro ainoita pakutengesa zvicherwa zvakaita semangoda ndizvo zviri kuita kumangoda ekwaMarange atengwe nemutengo uri pasi.
Vakuru veMMCZ vakamiswa neChishanu pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvezvicherwa chibvunzurudzwa pamamusoro pematengeserwa aitwa mangoda ekwaMarange.
Vakuru ava vakatadza kupindura mibvunzo yakawanda zvikurusei sei wekuti kambani yavo yakatengesai sei mangoda ekambani yaVaLovemore Kurotwi mushure mekunge kambani yavo, Canadile Miners, yatorerwa rezenesi rekuchera mangoda.
Sachigaro vekomiti iyi, VaTemba Mliswa, vakati MMCZ inoita inoshandiswa nemakurukota ehurumende kuita zvechitsotsi uye izvi ndizvo zvimwe zvinota kuti makambani makuru emangoda asade kutenga mangoda kubva kukambani iyi.
Asi vakasanobata chinzvimbo chemukuru wekambani iyi, VaMasimba Chandavengerwa, vakaudza komiti iyi kuti MMCZ inotengesa mangoda ayo zviri pachena.
Vakati ivo ndivo vane mvumo yekutengesa mangoda ese munyika uye havana ruzivo rwekuti pane mangoda ari kutengeswa zviri kunzwe kwemutemo.
Panyaya yakataurwa nevaimbove mutungamiriri wenyika, VaRobert Mugabe, yekuti nyika yakarasikirwa nemangoda anokosha mabhiriyoni gumi nemashanu emadhora, VaChandavengerwa vakati havana ruzivo nazvo.
Vakati kubvira muna 2010 kusvika gore rapfuura, kambani yavo yakatengesa mangoda anokosha mabhiriyoni maviri nezviuru mazana zvemadhora chete ($2.4b).
VaChandavengerwa vakatiwo vanhu vanofanira kuvapa mukana wekuti mangoda enyika anogadzirwa kuBotswana vachiti ivo havana ruzivo rwekuita izvi.
Asi nhengo dzekomiti iyi dzakati kana izvi zvikaitika zvinoreva kuti MMCZ inofanira kuvharwa nekuti nekuti inenge isisina basa.
Zvichakadai, mukuru wekambani yekuRussia ye DTZ OZGEO, VaVictor Kusyla, vakaudza komiti iyi kuti vaka katyamadzwa chose apo hurumende yakavabvutira kambani yavo muna 2016.
Vakati sevanhu vakaunza mari munyika havana kufara nedanho iri uye vakatokwidza nyaya iyi kuhurumende yenyika yavo iyo yakazotaura nehurumende yeZimbabwe.
Vakatiwo chimwe chisiri kuvafadza ndechekuti kambani yehurumende yakatora mugodhi wavo wemangoda wekuChimanimani, yeZimbabwe Consolidated Diamond Company, haisati yavabhadhara michina yayakatora pamwe nezvikwereti zvaive nekambani yavo sekuvimbisa kwavainge vaita.
Vakati pane vanhu vakawanda kuRussia vari kubvunza nezvekutanga mabhizimisi muZimbabwe asi vari kutya kuti makambani avo anogona kuzotorwa nehurumende.